सुनको मूल्य फेरि घट्यो, तोलाको कति पुग्यो ? – Sandes Post
सुनको मूल्य फेरि घट्यो, तोलाको कति पुग्यो ?
April 3, 2022 1216
काठमाडौं । सुनको मूल्य फेरि घटेको छ । साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार सुनको मूल्य ४ सय रुपैयाँले घटेको हो ।
प्रति तोलामा चार सय रुपैयाँले घटी ९९ हजार तीन सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।
शुक्रबार सुन ९९ हजार सात सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। तेजाबी सुनको मूल्य तोलाको ९८ हजार आठ सय रुपैयाँ निर्धारण भएको छ ।
चाँदीको भाउ भने स्थिर रहको छ । शुक्रबार एक हजार तीन सय ६० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आइतबार पनि सोही मूल्यमा किनबेच भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।
Prevचन्द्रागिरी केबलकार चढ्न डरमर्दो भयो, फेरी बाहिरियो यस्तो घटना
Nextइमरान खानकी पूर्वपत्नीले गरिन् खुलासा, ‘उनको शब्दकोषमा त्यो ‘सम्मान’ भन्ने नै छैन, नभए म उनीसँगै हुने थिएँ’
बाहिरियो वर्षा सिवाकोटीको बिहेको भिडियो : विदाईमा धुरुधुरु रोएको भिडियो अहिले भाइरल, वर्षासहित आफन्तहरुको पनि चल्यो रुवाबास (भिडियो)
राजधानीबासीलाई दुखको खबर ! कति तिर्नुपर्छ अब ?